about | သင်ကာဘုန်းမြင့်-Thinker Bhone Myint
ကိုသင်ကာ (Editor, Writer, Blogger & Artist)
(B.Sc., Dip D.S, M.A)
Former Editor (2002-2017)
– သုတစွယ်စုံမဂ္ဂဇင်း / သတင်းလွှာ နိုင်ငံတကာ ဂျာနယ်
-Living Color မဂ္ဂဇင်း / ခေတ်မြန်မာ
-Existence Online Magazine
-ဧရာဝတီ သတင်းဌာန / ဧရာဝတီ ဂျာနယ်
Editor (International Affairs) (2007 – )
“ဘလော့ဂ်ဟာလောကရဲ့ အခြားသော ပြတင်းပေါက်တစ်ခု”
ဘ၀ဆိုတာ နေထွက်ခြင်းနဲ့ နေ၀င်ခြင်းမှာ ရှိတဲ့ အမြဲတမ်း တိုက်ပွဲတစ်ခု…
အသက်ရှုနေသရွေ့ သင်ယူခြင်းဆိုတာ ရှိရမယ်….
ဘယ်အချိန်.. လောကကြီးကနေ ဘွဲ့ရမှာလဲ….
ကြီးမြင့်တယ်ဆိုတဲ့ ဘွဲ့ ဒီဂရီတွေထက်. မှန်ကန်စွာ သိမြင်သွားချင်တယ်…
အကြိမ်ကြိမ် ပြိုလဲချင်သလို ဖြစ်တဲ့စိတ်ဓါတ်ကို အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ပြန် ကောက်တင်ရင်း
ပြက္ခဒိန် စာမျက်နှာများကို ဆုတ်ယူဖြတ်သန်းနေမိတယ်….
Min Min Htike
ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် ပုံဖော်တာ တယ်ကောင်းပါလား
ဒီ အကြောင်း အရာ တင်ဆက်ပုံကပဲ ကဗျာ ဖြစ်တယ် ။
တစ်ခါ တစ်ခါ လူတချို့ဟာ ကိုယ့်ဖာသာ မသိလိုက်မသိဖာသာ
ကဗျာ တချို့ကို ရွတ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ် ။ … 🙂
ထင်တာပြောတာပါ ဗျာ … ဟဲ … 😀
ဒီအတွက်ထာဝရ ကျောင်းသားအဖြစ်…လောကကြိးကနေ သင်ယူသွားချင်ပါတယ်…ဘယ်အချိန်.. လောကကြီးကနေ ဘွဲ့ရမှာလဲ….ကြီးမြင့်တယ်ဆိုတဲ့ ဘွဲ့ ဒီဂရီတွေထက်. မှန်ကန်စွာ သိမြင်သွားချင်တယ်…အကြိမ်ကြိမ် ပြိုလဲချင်သလို ဖြစ်တဲ့စိတ်ဓါတ်ကို အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ပြန် ကောက်တင်ရင်းပြက္ခဒိန် စာမျက်နှာများကို ဆုတ်ယူဖြတ်သန်းနေမိတယ်….
ဒီအတွက်ထာဝရ ကျောင်းသားအဖြစ်…လောကကြိးကနေ သင်ယူသွားချင်ပါတယ်…ဘယ်အချိန်.. လောကကြီးကနေ ဘွဲ့ရမှာလဲ….ကြီးမြင့်တယ်ဆိုတဲ့ ဘွဲ့ ဒီဂရီတွေထက်. မှန်ကန်စွာ သိမြင်သွားချင်တယ်…အကြိမ်ကြိမ် ပြိုလဲချင်သလို ဖြစ်တဲ့စိတ်ဓါတ်ကို အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ပြန် ကောက်တင်ရင်းပြက္ခဒိန် စာမျက်နှာများကို ဆုတ်ယူဖြတ်သန်းနေမိတယ်….+1